Ady mitombo | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Ady mitombo
Mianatra mamboly akanjo: fambolena, fiahiana, fijinjana
Ny mpamboly tsirairay ao amin'ny lisitry ny asany dia manana kolontsaina, rehefa mitombo izay zavatra foana eny, tsy misy izany. Anisan'ireo karazan-tsakafo maro ho an'ny maro, ny radisy dia tsy misy ankoatra. Ny kolontsaina indrindra. Toa manana fahalalana ampy ho an'ny fambolena radi izy, saingy ny fijinjana dia tsy sambatra na izany aza - ny rambony dia hitombo.
Ny antony mahatonga ny radi dia mangidy, ary olana hafa rehefa mitombo
Maro ny zaridaina manana radies izay mifandray amin'ny fanokafana ny vanim-potoanan'ny legioma, ny lohataona be sy ny fandresena voalohany ao amin'ny zaridaina. Raha ny tena izy dia tsy mila fepetra manokana ireo fototarazo ireo ary mora ny mitazona izany. Saingy, indrisy, matetika izy ireo no nanjary fahadisoam-panantenana voalohany. Nahoana ny radisy no mandeha amin'ny zana-tsipìka, manome lolom-po na lavaka, inona ny fahadisoana nataon'ireo mpamokarana mpamboly, inona no atao mba hamonjena ny vokatra - hambaranay izany rehetra izany taty aoriana.
Karazana fambolena sy famokarana akanjo ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, fiomanana, fikarakarana
Ny radi dia iray amin'ireo legioma fototra indrindra eo amin'ny tsenam-ponenana, ary raha mbola mieritreritra ny mety hitomboan'ny taona manontolo ianao, dia tsy misy vidiny ho an'ny orinasa mihitsy. Na izany aza, ny fambolena fambolena manify sy matsiro amin'ny fotoana rehetra isan-taona, dia mendrika hikarakarana ny fepetra mety amin'ny fivoarany sy ny fivoarany.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ady mitombo